Khilaaf Xooggan oo ka dhex-taagan R/wasaaraha Jarmalka & W/A/gudaha dalkaasi oo kudhow inuu xilka iska casilo. ‘Sawirro’ | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA CAALAMKA Khilaaf Xooggan oo ka dhex-taagan R/wasaaraha Jarmalka & W/A/gudaha dalkaasi oo kudhow...
Khilaaf Xooggan oo ka dhex-taagan R/wasaaraha Jarmalka & W/A/gudaha dalkaasi oo kudhow inuu xilka iska casilo. ‘Sawirro’
Muqdisho (SNTV) Wasiirka Arrimaha gudaha dalka Jarmalka ayaa qorshaynaya in kulankii ugu dambeeyay uu la qaato R/wasaaraha Jarmalka Angela Merkel kadib markii uu ku hanjabay in uu ka degayo xilka markii ay soo if baxeen dibadbaxyo looga soo horjeedo siyaasadda Merkel ee kuwajahan xagga Socdaalka .
Horst Seehofer oo ah wasiir Arrimaha gudaha dalka Jarmalka ayaa lagu soo waramayaa inuu ku wajahan yahay xarunta xisbiga CSU oo ah xisbiga ugu muhiimsan oo katirsan isbahaysiga Merkel.
Wasiir Horst Seehofer ayaa qaba in booliiska ay ka qaadaan muhaajiriinta ku sugan xadka Bavaria islamarkaana ay kuwa magangelyo doonka ahi ay la aadaan meelo kale, halka ay Merkal oo ah R/wasaaraha jarmalka ay ku adkeysanayso in heshiis ballaaran oo kuwajahan muhaajriinta lala galo midowga reer Yurub.
Warka ayaa intaasi ku daraya in waqtigan ay si weyn cirka isku sii shareertay mashkiladda muhaajiriinta ee ka dhex-taagan wasiirka Arrimaha gudaha Jarmalka Horst Seehofer iyo Ra’iisul wasaare Angela Merkal, mana jiraan wax waan-waan ah oo suurtagal ah in laga dhex sameeyo si ay laysagu soo dhoweeyo aragtida kala gedisan ee labada mas’uul ee kusaabsan maareeynta muhaajiriinta.
Khatarta Mrs Merkel ayaa ah in Mr Seehofer uu xisbiga CSU ka saaro Isbahaysiga, halkaasi oo ay Angela ku lumin doonto aqlabiyadda ay ku lahayd gudaha baarlamaanka dalka Jarmalka.
Next articleWejiga labaad ee dib u eegista Dastuurka oo la daah-furay